दुई वर्षमै किन खोसियो आदिकवि भानुभक्तको जागिर ? – Khabar Silo
काठामाडौं । दुई पांग्रे सवारीको डिकीमा पैसा या कुनै सामान राखेर हिँड्नु भएको छ ? सावधान !! तपाईको सामान हराउन सक्छ । अहिले पार्किङ या अन्य कुनै स्थानमा राखिएका दुई पांग्रे सवारीका डिकीबाट सामान हराउन थालेका छन् । अहिले स्कुटरको डिकीबाट रकम चोरी हुने गरेको नयाँ रहस्य खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी बृत्त नयाँ बानेश्वरको […]
दमौली: पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको व्या’स नगरपालिका–२ बु’ल्दीपुल नजिक शनिबार राति भएको मोटरसाइकल दु’र्घटनामा एक युवाको मृ’त्यु भएको छ । दु’र्घटनामा एक युवती घा’इते भएकी छन् ।मृ’त्यु हुनेमा व्यास नगरपालिका–२ मा’लेबगर बस्ने २२ वर्षीय विवेक थापा मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरिक्षक युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । दु’र्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ बस्ने […]
झापा- नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमकका पाँच कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको छ । विद्युत प्राधिकरणका ५ सहित ६ जनामा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमकमा काम गर्ने पाँच कर्मचारीमा कोरोना देखिएको दमक नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका नगेन्द्र भट्टराईले पुष्टि गरे । त्यस्तै दमक ५ बस्ने एक महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ […]